လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ကြိုက်တာဟာ စစချင်းက ရုပ်ရည်ကြောင့်လို့ ပြောလို့ရတယ် – Candle Myanmar
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ကြိုက်တာဟာ စစချင်းက ရုပ်ရည်ကြောင့်လို့ ပြောလို့ရတယ်
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ကြိုက်တာဟာ စစချင်းက ရုပ်ရည်ကြောင့်လို့ ပြောလို့ရတယ်။
သူ့ရုပ်ရည်က ကိုယ့်မျက်စိထဲ လှနေလို့၊ ကြည့်ကောင်းနေလို့ ကိုယ်ကြိုက်မိသွားတယ်၊ ချစ်မိသွားတယ်ပေါ့။ နောက်တော့ အချင်းချင်း ချစ်မိကြပြီ ဆိုပါစို့… ချစ်စမှာတော့ တစ်ယောက်ချို့ယွင်းချက်ကို တစ်ယောက် မမြင်တတ်ဘူး။ မမြင်အောင်လည်း ချစ်စိတ်ကဖုံးထားပေးတယ်။ မြင်ခဲ့လည်း ချစ်စိတ်ကြောင့် ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးတယ်။
ချစ်သူအချင်းချင်း ချစ်ကြိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လူလူချင်း ပေါင်းသင်းခင်မင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့၊ ရေရှည်တည်တံ့ဖို့က စစချင်းတွေ့တဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ပဲမရတော့ဘူး။ အကျင့်စရိုက်၊ အပြောအဆို၊ စိတ်သဘောထား၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု.. စတာတွေက ပါလာပြီ။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီလိုစကားတွေ ငါတို့ မကြာခဏကြားဖူးကြမှာပေါ့၊ “အကျင့်မကောင်းလို့ မပေါင်းတော့ဘူး ” “အချိုးမပြေလို့ မခေါ်တော့ဘူး..” “ကပ်စေးနည်းလို့ ဘယ်သွားသွားမခေါ်တော့ဘူး” “စရိုက်မတူလို့ လမ်းခွဲလိုက်တယ်”…. ဆိုတာမျိုးတွေလေ။
ချစ်ရင်း၊ ချစ်ရင်း လမ်းခွဲသွားကြသူတွေဟာ နောက်တစ်ယောက်ကြောင့်၊ ကြားလူကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သလို အထက်ကပြောတဲ့.. အကျင့်စရိုက် သဘောထားတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ချစ်သက်တမ်းလေး နည်းနည်းရှည်လာမှ တစ်ဘက်လူအကြောင်း ပိုသိလာရတာမျိုးဆိုတော့ ဘယ်သူကမှလည်း တိုးတက်လိုစိတ်၊ ကြီးစားလိုစိတ်မရှိသူကို ကိုယ့်အနာဂတ်ပုံအပ်ပြီး မယူရဲကြဘူး။ အပြင်ပန်းကို လှနေအောင်ဆင်နိုင်သလောက် ကိုယ့်အိမ်ခန်းကို သပ်ရပ်အောင် မလုပ်နိုင်တဲ့၊ ကြက်ဥတစ်လုံးတောင် မကြော်တတ်သူကိုလည်း ရေရှည်လက်တွဲဖို့ စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီးပေးတယ်။ ကိုယ့်မိဘ၊ သူ့မိဘကို ရိုသေလေးစားရမှန်းမသိရင် ပိုဆိုးပါတယ်။
ဒါကြောင့် RS တစ်ခုပြတ်သွားတဲ့အခါ သူခြံခုန်ချင်လို့၊ သူ အသစ်အဆန်းရှာချင်လို့ဆိုပြီး တစ်ဘက်လူကို အပြစ်ပိုဖို့မယ့်အစား ဘာကြောင့် လမ်းခွဲကြရတာလဲ ကိုယ့်ဘက်က အားနည်းချက်၊ သူ့ဘက်က သိမ်ငယ်မှုတွေကို ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ လိုတယ်။ လမ်းခွဲတဲ့အခါ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်စလုံး ခံစားရတာချည်းပဲ။ စိတ်ထားတတ်သူနဲ့ တနုံ့နုံ့ခံစားတတ်သူတာ ကွာသွားတာ။ နှစ်ရှည်ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြသူဆိုရင် လမ်းခွဲမယ်ဆိုတဲ့စကားကို ပြောဖို့ အားယူ၊ အချိန်ယူရတာမျိုးလည်း ရှိတတ်တယ်။ ပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး၊ အလှဆုံး၊ အကောင်းဆုံးကို ငါတို့ ရွေးယူတတ်ကြသေးတာပဲ။ အိမ်ထောင်ပြုတယ်၊ ဘဝတစ်သက်လက်တွဲဖို့ဆိုတာက ပစ္စည်းဝယ်သလောက်မှ မလွယ်ကူတာ… လေနော်
အဲဒိလိုပဲ RS တစ်ခု ခိုင်မြဲလာတာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတစ်ခု နှစ်ကြာလာတာ ပိုပိုချစ်မိလာတာတွေဟာလည်း တစ်ဘက်လူရဲ့ အကျင့်စရိုက်၊ စိတ်နေစိတ်ထား၊ ရိုးသားမှု.. စတာတွေကြောင့်ပဲ။ သင့်တော်တဲ့၊ အတွဲညီတဲ့၊ လိုက်ဖက်မှုရှိ၊ နားလည်မှုရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို သူတို့ရှာဖွေတွေ့သွားလို့ပေါ့။
ချစ်တုန်းကတော့ ချစ်ခဲ့ကြပြီး လမ်းခွဲချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ်ဘက်က အပြစ်မဲ့အောင် တစ်ဘက်လူကို အပြစ်ပုံချတာမျိုးက မကောင်းဘူးပေါ့။ ချစ်တဲ့အချိန်က ကြည်ကြည်နူးနူးချစ်ခဲ့ကြပြီး လမ်းခွဲချိန်ရောက်ရင်လည်း သာသာယာယာလမ်းခွဲကြတာပေါ့နော်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုလူမျိူးကိုပဲ ကိုယ်ရွေးချယ်ခဲ့မိတာ ဒီလိုလူမျိုးကိုပဲ ကိုယ်ချစ်ခဲ့တာလေ မဟုတ်ဘူးလား..
Previous: ကျွန်တော့်ကို ဘယ်သူနဲ့မှ လာနှိုင်းယှဥ်တာ မကြိုက်ဘူး..
Next: တကယ်လို့ တစ်နေ့နေ့မှာ…..